Saizi ye screw conveyor inogona kugadzirwa kubva ku -168 kusvika ku-323, iyo yekurerekera degree uye kureba kunogona kuvezwa. Mubvunzo: 1, 1000/5 / 5.5, "1000" yeiyo giya bhokisi mhando, "5" yeiyo yekudzikisa reshiyo, "5.5 ″ ye .iyo mota simba (380V / 50Hz / 3P, 1450rpm); 2. Mota yakajairwa kumisikidzwa: 380V, 50Hz, 1450rpm, matatu-phase, vatengi vane zvakakosha zvinodiwa zvinogona kugadzirwa; 3. Kana paine akakosha mamiriro, anogona kusarudza zvinoenderana nemaitiro eual mamiriro emota ...
Kazhinji hanger inotakura rutsigiro zvinhu ndeyeAluminium, asi kana ukasarudza kuendesa jecha, ndapota sarudza simbi yekutsigira. Kupedzisa kubatanidza kunowanzo kuve saizi imwe chete kana hupamhi hwesimendi screw conveyor yakasimbiswa. Butterfly vharafu inoshandiswa kubatanidza uye kudzora kuyerera kwezvinhu. Kazhinji tinosarudza aluminium diski, yakajeka uye yakasimba. Inogona kuve yekushandisa kana pneumatic yakavhiyiwa. 220v kana 24 solenoid vharafu inowanikwa zvese pneumatic oparesheni. Model Kukura Kurema (k ...
1.Vibratory Iyo inodedera sarudza yepasi rose zvinhu, Kirasi F kuputira, yakasimba chisimbiso, ine premium kubereka, yakasimba muviri dhizaini. Isu tinonyanya kusarudza OLI-WOLONG kana DKTEC vibratory kuti ibudise vibration kune jecha batching bin Model No Speed ​​Force Kuburitsa Simba Net Kurema Kukura MVE100 / 3 3000rpm 99kg / 1kN 0.04kw 4.9kg 10A0 MVE200 / 3 3000rpm 198kg / 2kN 0.09kw 6.6kg 20A0 2.Pneumatic System Isu tinonyanya kusarudza AIRTAC pneumatic cylinder pamwe chete neye ...
M2095 M20105 SCAB-015Q-432 SCAZ-230-154-1 14mm SCAZ-230-184 SCAZ-230-174 SCAB-010-246 SCAZ-230-154-2-14mm SCAB-015Q-232233239 SCAZ-015Q-159 SCAZ -230-157 SCAZ-230-175 SCAZ-230-179179-1 SCAZ-900-146-16mm SCAZ-230-180180-1180-2 SCAZ-900-145, HCR-16mm SCAB-015Q-693LR SCAB-230- 231
Zvigadzirwa Zvakanakira Taura Nesu Zvinogara zvakakwirira musanganiswa homogeneity uye mapfupi ekuvhenganisa macircuit ● Kuwedzera nekukurumidza musanganiswa homogeneity kuburikidza neyakaomarara zvinhu kuchinjanisa ● Uniform kusachinja-chinja uye homogeneity mune yega yekusanganisa kutenderera Optimum simba kunyatsoshanda ● Kwakanaka kusanganisa mashandiro kunyangwe yakaderera musanganisi kumhanya kuumbwa kwezvinhu zvega zvega ● Yakaderera simba rekushandisa nekuda kwenguva pfupi yekusanganisa, yakagadziridzwa kusanganisa ...
SICOMA CONCRETE MIXER SICOMA inogadzira akateedzana evasanganiswa emamodeli mazhinji. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kambani yedu inosarudza akawanda akajairwa MAO / MSO / MEO / MPC / AMP mainframes. Muchina uyu unonyanya kuve neanomwe system zvikamu: Kusanganisa tangi / Kusanganisa system / Junction bhokisi / Kuongorora uye alarm system / Lubrication-yekuisa chisimbiso system (kwete yeMPC / AMP akateedzana) / Kuburitsa system / Transmission system MAO3000 / 2000 MAO4500 / 3000 Shatt inopera dziviriro yakawanda soal uye mweya kuchenesa soal protectio ...
Cement silos, inonziwo matangi esimende, inogona zvakare kukamurwa kuita kupatsanurwa simende silo uye yakasangana simbi simbi silo. Split silo inowanzo kuve yakakodzera kutakura yemidziyo kuchengetedza mutengo wekufambisa uye kutenderera. Cement inoshandiswa pamwe chete neinotsigira kongiri yekusanganisa simiti, uye mushandisi anotsiva simende silos nemasimba akasiyana uye huwandu maererano nezvakabuda muchirimwa chinosanganisa. Icho chimwe chezvikamu zvikuru zvekongiri yekusanganisa chirimwa. Pamusoro pekuchengetedza simende, iyo ...
Belt Conveyor Bata Nesu Kune akawanda marudzi eakasarudzika bhandi conveyor yekudyisa sisitimu mune yeyadhi, senge yakatwasuka kubheja conveyor, inoteedzera bhandi conveyor, kufamba sub-feed bhandi conveyor, S-yakaumbwa sub-feed bhandi conveyor, rotary sub-feed bhandi conveyor. uye yakasanganiswa sub-feed bhandi conveyor, ayo anoonekwa nekupa uye kuburitsa pane akawanda mapoinzi uye mashoma basa. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mune simbi, yangu, yemagetsi chiteshi, zvekuvaka indasitiri, ...
Flat Belt Bata Isu Iyo yakawanda texitle inoratidzira bhandi inoshandiswa zvakanyanya kuendesa zvinhu mumunda wangu, zviteshi, simbi. Kune akawanda marudzi e fiber mhando senge polyester, donje, terylene, polyamide, monofilament, uye isu tinonyanya kushandisa nylon, polyamide）, polyester EP mhando bhandi. Ndokumbirawo uteedzere kudhindwa Textile Item Chimiro Textile Item Ukobvu Tensile Simba (N / M) Kukora kwevhavha yerubhi (mm) Wide Range (mm) Warp Weft ...
Guruva Muunganidzi Taura Nesu Vibratory guruva mutori rakagadzirwa kuti riisirwe pamusoro pemasosi, mabhini uye hoppers. Ivo vanouya nekirindindi isina simbi-isina kukiya uye yakapetwa pasi mhete, iyo ine yakatwasuka yakatwasuka cartridge firita zvinhu, izvo zvinonatswa nemagetsi mota vibrator. Kazhinji guruva rinotora feni rinoshandiswa mune yepamusoro kongiri musanganisi. Model Dedusting nzvimbo (㎡） Dedusting vhoriyamu (m³ / h) Qty yemaguruva emabhegi (pcs) ...
Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Aggregate Batching System, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Otomatiki Aggregate Batching System, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu,